विभिन्न रोगहरु लागि उपाय रूपमा जुत्ता रगत
रगत हाम्रो स्वास्थ्य धेरै घटक असर गर्छ। यो शरीर गरेको अक्सिजन सन्तृप्ति, CO2 स्थानान्तरण, हर्मोन, अन्य पोषक र इन्जाइमहरु लागि जिम्मेवार छ; यो प्रतिरक्षा प्रणाली समर्थन आन्तरिक अङ्गहरूको गर्मी ब्यालेन्स नियन्त्रण गर्दछ। रगत कार्यहरु अपरिहार्य र अति महत्वपूर्ण छन्। यसको अवस्था आधारमा, सामान्य मा उपस्थिति, बौद्धिक क्षमता र मानव स्वास्थ्य असर गर्छ।
हाम्रो रगत को अवस्था धेरै कारक मा निर्भर गर्दछ। यसलाई हामी जीवन शैली कस्तो नेतृत्व तथ्यलाई प्रभावित छ (गरिब आहार, व्यायाम, धूम्रपान, रक्सी को कमी), वरपरको क्षेत्र को वातावरण (निकास ग्याँसहरु, प्रदूषित हावा र पानी), लागूपदार्थ, तनाव र हाम्रो जीवन को अन्य नकारात्मक घटक को प्रयोग। यो सबै रगत toxins, स्वास्थ्य मा एक हानिकारक असर कि toxins को दूषण गर्न जान्छ। हृदय, कलेजो, अन्तस्करणले: "फोहर" रगत शरीर मार्फत र रगत शुद्धीकरण लागि जिम्मेवार मुख्य शरीर मार्फत पारित, एक बन्द प्रणालीमा circulates। फलस्वरूप, toxins दृढ त्यहाँ बसिरहेका, आफ्नो काम disrupting, आन्तरिक अङ्गहरू रगत कक्षहरू साथ धोए छन्। अब, शरीर अस्वस्थ रगत प्रवाह।
को circulatory सिस्टम को normalization र अन्य प्रभावित प्रणाली लागि आवश्यक प्रक्रिया रगत सफाई छ। आधुनिक उपकरण र उच्च योग्य विशेषज्ञहरु तपाईं सुरक्षित गर्न मद्दत गर्नेछ, र सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, प्रभावकारी रगत सार्ने काम पूरा गर्न। प्लाज्मा विनिमय "साफ" को सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका हो। को प्रदूषित लावा र toxins प्लाज्मा (10 एमएल) को रगत फिर्ता लिया भाग यसको प्रक्रिया मा। यो धेरै निस्पंदन, को purified शरीर फर्के छ जो पछि बित्दै।
undergo गर्नुपर्छ 3-5 plasmapheresis प्रक्रियाहरु इच्छित परिणाम हासिल गर्न। पहिलो पछि रगत देखि toxins हटाउँदछ।2र3सत्र को intercellular स्तर मा रगत सफा गर्न अनुमति दिन्छ। अर्को शब्दमा, आन्तरिक अङ्गहरूको कक्षहरू देखि toxins हटाउन। सफाई रगत plazmafarezom hepatitis करार को संभावना समाप्त। यो पनि एचआईभी रोक्छ।
मुखासे को रगत सफाई मद्दत गर्छ!
समस्या अनुहार छाला पनि शरीर को slagging को परिणाम हुन सक्छ। यस मामला मा, रगत सफाई गुणस्तर एक चिल्लो स्पष्ट छाला फेला पार्न र यो एक स्वस्थ उपस्थिति दिन मदत गर्नेछ। जब autohemotherapy डाक्टर रोगी को नस (1 देखि 10 मिलीग्राम गर्न) रगत लिन्छ र gluteal मांसपेशी यसलाई परिचय। यो उपचार बाहिर एक पटक हरेक 10 दिन लगे छ। तथ्याङ्क अनुसार, विरामीहरु को 80% आफ्नो अनुहार मा सुनिंनु को एक कमी अनुभव। जोगिन
जटिलताहरू वा अन्य प्रतिकूल प्रभाव, यो समस्या सुलझाने को अन्य विधिहरू मदत गर्दा plasmapheresis वा शुद्धीकरण अन्य विधिहरू प्रयोग गरिन्छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। यो रगत शुद्ध गर्न contraindications को निदान र पत्ता लगाउने मा विशेषज्ञहरु संग परामर्श गर्न आवश्यक छ।
तपाईं डाक्टर विश्वास छैन भने, त्यसपछि रगत सफाई स्वतन्त्र गर्न सकिन्छ। यो एक स्नान, राम्रो पसिना र toxins फिर्ता गर्न, स्नान को एक किसिम भ्रमण लागू गर्न पर्याप्त छ। Whichever विधि तपाईंले चयन, यो एक स्वस्थ जीवन शैली को परिणाम, अधिक पानी पिउने, मेरी रस (सकरखण्ड, स्याउ) झटका, कायम गर्न थप फल र तरकारी, व्यायाम खान, ताजा हावा श्वास फेर्न र जीवनको आनन्द महत्त्वपूर्ण छ भनेर सम्झना। त्यसपछि यो के!
गर्भनिरोधी को ओस्टियोोकोन्ड्रोसिस
महिला र पुरुष gonads
Nabeul, होटल को टुनिशिया समीक्षा र शहर को आकर्षण
अभोकाडो। व्यञ्जनहरु उत्पादनहरु को असामान्य संयोजन जित्न
चेबोकसारी सहकारी संस्थान: संकाय, समीक्षा
Uterine स्थानच्युति: के? स्थानच्युति र स्थानच्युति को उपचार
Petrov पोस्ट - प्रायश्चित्त को रहस्य सुरक्षित